လေနုအေး: အာဒမ်ရယ် ဧ၀ရယ် ပြေတီဦးနဲ့သားရယ် (သို့ ) သားနဲ့ ရုပ်ရှင်
Posted by တန်ခူး at 11:58 PM
ကျနော့မှာ ကာတွန်းကားလေးတွေ ရှိပါတယ်။ အခွင့်သင့်ရင် သားသားအတွက် ပေးချင်တယ်။ ဂျပန် ကာတွန်းကားလေးတွေပါ။
တိုက်ဆိုင်တယ် တနေ့ကပဲ အဲ့ဒီကားကို ကြည့်မိတယ်။ ဇာတ်ကို ပြန်ဖြည်ထားတာမို့ ပြေတီဦးဟာ လုံးလုံးကြီး လူဆိုးဖြစ်မသွားဘူး။
PG ဆိုတဲ့ စကားလုံးက သိပ်တာသွားတယ်။ မိဘနဲ့ အတူကြည့်ရင်း မိဘက သိသင့်သိထိုက်တာတွေ ရှင်းပြပေးတာ ကောင်းတဲ့အလုပ်ပါပဲ။
မီဒီယာရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုက ဒီခေတ်မှာ အတော်လေး ကျယ်ပြန့်တယ်။ လွှမ်းမိုးခံတဲ့သူနဲ့ လွှမ်းမိုးမခံတဲ့သူဆိုတာတော့ ရှိမယ်။ ကောင်းတာတွေ အတုယူဖို့၊ မကောင်းတာတွေ ပယ်ဖို့ဆိုတဲ့ အသိစိတ်ဓါတ်တခုကို ပြုစုပျိုးထောင်ကြရင် အဆိပ်အတောက်ဆိုတာတွေဟာ ဆေးဖက်ဝင်လာနိုင်မယ် မဟုတ်လား။
သမီးလေးမွေးထားတယ်.. အစ်မရေ ...
ခုမှ ၂ နှစ်ပဲ ရှိသေးတယ်..နောင် ၁၃ နှစ်လောက်အတွက် ကြိုပူနေရတယ်..။
ဒီမှာ မျိုးဆက်သစ်လေးတွေရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု အတော်ပြောင်းလဲသွားတာတော့ အမှန်ပဲ မတန်ခူးရေ..
စိုးရိမ်စရာပဲ .... သေချာ ဂရုစိုက်ရမယ့်သဘော သားနည်းနည်းကြီးလာလည်း ဖုန်းတွေ အိုင်ပတ် တွေ ပေးမသုံးတာကောင်းမယ်လို့ ကျနော်တော့ ထင်တာပဲ ။
ဒါပေမယ့် သေချာ ဂရုစိုက်တတ်တဲ့ မိဘတွေရှိနေလို့ တော်သေး ။
လိမ်မာပါစေပဲ ဆုတောင်းရမလို ။
ဒါနဲ့ အဲ့ကားလင့်လေးရှိရှယ်ပါအုံးးး :)
ဟုတ်တယ် အမတန်ခူးရေ ...
မြန်မာရုပ်ရှင်လောကမှာ ကလေးတွေအတွက် ရည်ရွယ်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားမျိုး မရှိသလောက်ကို နည်းပါတယ်။ ဝေါ့ဒစ်စနေက ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားလေးတွေလို ကလေးတွေအတွက် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကောင်းလေးတွေ တီဗီ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးတွေ ဘယ်သူများ ဖန်တီးရိုက်ကူးမလဲ မျှော်လင့်မိပါရဲ့ ... ။
မရေ... စာတွေပြန်ရေးလို့ ၀မ်းသာမိတယ်။ ဇွန်လည်း အစ်မရေးသွားတဲ့အထဲမှာပါတဲ့ ကာတွန်းကားလေးတွေကို သိပ်ကြိုက်တယ်။ ခုထက်ထိ ကာတွန်းကားတွေကို စွဲစွဲမြဲမြဲ ကြည့်နေတုန်း။
အခုခေတ်မှာ ကလေးတွေကို အမြင်မှား၊ အတွေးမှား၊ အတုယူမမှားအောင် မျက်ခြေမပြတ် စောင့်ရှောက်ကြည့်ရှုဖို့ မိဘတွေရဲ့တာဝန်က ဟိုးအရင်ကထက် ပိုပြီးကြီးလေး လာသလိုပဲနော်။ :-/
ညီမPifpifရေ. သိပ်စိတ်မပူပါနဲ့ညီမရယ်. ခုခေတ်ကလေးတွေက smartဖြစ်တော့ နားလည်အောင် ငယ်ကတည်းက နဲနဲချင်းပြောရမှာပေါ့
ပန်ရေ. ညီမက အဲဒီမှာရှိနေတော့ ပိုမြင်ရတွေ့ ရကြားရမှာပဲနော်
မရတော့ဘူး မောင်မျိုးရေ. အိုင်ပတ်သုံးနေပြီ. ဒါပေမယ့် မျက်ခြေမပြတ်အောင် ကိုယ့်ရှေ့ ပဲသုံးခိုင်းတယ်. အမက Burmese classic ကကြည့်တာလေ
ကေရေ. ပြေတီဦးက ဥပမာမို့ဖြန့် တွေးစရာတွေအများသားနော်
မေရေ. အမှန်ပဲ. မြန်မာပြည်ကထုတ်လုပ်ရေးသမားတွေက ကလေးပရိသတ်ကို သိပ်စိတ်မဝင်စားကြဘူးထင်တယ်. တကယ်ကကေံးတွေက ပိုအရေးကြီးတာလေ
ညီမဇွန်ရေ. အမကလဲညီမတွေကိုအမြဲလွမ်းနေတာပါ. ဟုတ်တယ်ညီမရေ. ငယ်တုန်းကွှံတ်မထားတာကောင်းတယ်